Maamulka gobolka Sh/dhexe oo dib u howl gelinaya garoonkii diyaaradaha Jowhar – STAR FM SOMALIA
Maamulka gobolka Sh/dhexe oo dib u howl gelinaya garoonkii diyaaradaha Jowhar
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar kaasoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay aan la isticmaalin.
Dayactirkan oo isugu jira labo qeybood mid lagu sameynayo dhabaha ay diyaaradaha ka haadaan kana soo degeen iyo mid kale oo ah dhismaha xafiisyada iyo qolka soo dhoweynta.
Dhagax dhigga dayactirka garoonka diyaaradaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ku xigeenada guddoomiyaasha maamulka gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen oo ka hadlay munaasabadii dhagaxdhigga ayaa sheegay in garoonka oo dhirirkiisu yahay 3km ballaciisuna yahay 30m ay isticmaali karaan diyaaradaha yaryarka ah ee gobolada dalka Soomaaliya isaga kala goosha isagoo ugu baaqay ganacsatada inay isticmaalaan garoonka marka dayactirka uu ku dhamaado oo ah muddo kooban.
Dhowaan ayaa maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Sh/dhexe waxa ay ku guuleysteen inay ka raraan dad ka soo barakacay deegaano ka mid ah degmada Jowhar kuwaasoo muddo ka badan sanad degenaa hareeraha garoonka diyaaradaha ee Jowhar.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa markii ugu dambeysay ee ay diyaarad ka soo degta ahayd xilligii fataahada wabiga Shabelle ee 2013kii oo ay ka degtay diyaarad ay lahayd Qaramada Midoobay uuna saarnaa ku xigeenka wakiilka Qaramada Midoobay xilligaa Philihp Lazarani.
in ka badan 5,000 oo xoolo Lo’ ah ayaa maanta loo dhoofiyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta